10 Charming Izinqaba EFrance ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Charming Izinqaba EFrance ngu zemininingwane
Ingabe wena uthanda ehamba ngesitimela? Ingabe wena uthanda ukubona izinqaba okumangalisayo emazweni afana no-Fulansi? Uma kunjalo, ke Usufike endaweni efanele. Lokho kungenxa yokuthi lesi sihloko “10 Charming Izinqaba EFrance ngu zemininingwane” uzokunika uhlu eqondile izinqaba eziyishumi ebukekayo kakhulu France. Yini enye, sizobe ikutshele ukuthi sifinyelele kubo ngesitimela!
1. Chateau ka Chenonceau
Chateau ka Chenonceau is umuntu eliyingqayizivele njengoba abawakha ngalo ku izisekelo isigayo ku 16th ekhulwini. You can kalula uwufinyelele nge isitimela le nqaba liseduze kakhulu a esiteshini. Ungathola ke kusukela Tours, okuyidolobha okunengqondo eduze castle.
Nantes ukuze Tours Izitimela
Lille, sokuthi Tours Izitimela
2. UChateau waseChantilly
Akhiwe Chantilly bezindlu, lokhu castle ngempela kuwufanele ukuvakashelwa uma ubona indlela okubukeka ngayo. Kuyinto eduze maphakathi Paris okuyinto kwenza ukuhamba kuwo kushelele.
3. Isigodlo saseFontainebleau
Yebo, ke Ngobuchwepheshe esigodlweni, kodwa okhathalelayo, kungcono obumangalisayo! Bakha Fontainebleau emuva 12th ekhulwini, futhi noma kunjalo ubukeka umxhwele futhi igcinwe kahle. Kuba njalo lula ukuvakashela. Ungakwazi ukufinyelela kuwo kusukela Paris esikhathini esingaphansi kwehora Transilien umugqa R.
4. I-Chateau de Breteuil
Ungathola le nqaba langa ngaphakathi park emvelo kazwelonke kunjalo ngaphandle kweParis. Nokho, ukuvakashela le nqaba enhle ngesitimela kuyinto kancane olukhohlisayo njengoba kukhona kuphela Shuttle ukuthi kukho samaqanda. Okungenani usengakwazi ujabulele ngesitimela eParis!
Strasbourg eParis Izitimela
Chambord Castle kuyinto castle mesmerizing ngempela futhi elinesithunzi nalokho kwenele ngokuvakashela. Ukuze uthole kuso, uzodinga itekisi noma Shuttle kusuka edolobheni Blois. Nokho, ekufinyeleleni Blois iyatholakala emadolobheni amaningi ase-France. Ungathola esikhathini esingaphansi kwehora nesigamu uma uvakasha kusukela Paris.
6. I-Chateau d'Amboise
Enqabeni Amboise liphakathi izinqaba ebukekayo kakhulu France. Kuyinto jewel yangempela bokwakha kusukela Renaissance. Ungakwazi ukufinyelela Chateau kalula ngesitimela emadolobheni amaningana e-France nge TGV noma phakathi kwamadolobha izitimela.
7. I-Famous Castle Chateau de Monte-Cristo
Sincoma kakhulu lokhu cute, castle encane njengoba edume Alexandre Dumas walakha! Ungakwazi ukufinyelela Monte Cristo Castle kalula nge umugqa isitimela lendawo njengoba kulungile Paris! Unalokho engqondweni, ungakwazi ukuthatha noma yisiphi isitimela uma bavelaphi kwenye indawo.
8. I-Amazing Castle Chateau d'Azay-le-Rideau
Kuyinto enhle kakhulu ngempela castle encane zakhelwe esiqhingini ngaphakathi echibini elincane! Ngeke usathola asemahle kunalokhu. Ungathola le nqaba kalula ngokuthatha isigamu kohambo lwamahora isitimela sisuka emzini wase-Tours. Khona-ke uyodinga kuphela ukwenza okuwuhambo lwemizuzu engu-20 ekamu.
Kungase kungabi phakathi izinqaba ebukekayo kakhulu France, kodwa kwadingeka thina ukuze ulifake. Le nqaba kuyinto ocebile emlandweni, futhi ngempela obumangalisayo, hhayi kuphela e isendleleni ebukekayo! I abaseduze sesitimela enqabeni ungaphakathi Selestat, futhi ungakwazi ukufinyelela ke kusukela Strasbourg noma neminye imizi eminingana eseduze.
I Chateau de Pierrefonds ngokungangabazeki efanelwe kakhulu kokuba uhlu mayelana izinqaba ebukekayo kakhulu France. Ungasebenzisa kuphela ukufinyelela enqabeni ngokuthatha Isitimela Compiègne, ke ukuthatha ibhasi ukuze Pierrefonds.
Uma udinga ulwazi oluthe xaxa travel isitimela 10 Charming Izinqaba EFrance ngu zemininingwane, ungakwazi usithinte indawo yethu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-castles-france%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Izinqaba europetravel Izikhangibavakashi travelfrance